‘फेरि उठ्न समय लाग्छ, पोखराका व्यवसायीलाई पनि नआत्तिन भनेका छौं’ « AayoMail
‘फेरि उठ्न समय लाग्छ, पोखराका व्यवसायीलाई पनि नआत्तिन भनेका छौं’
देउवासँग भेटेलगत्तै महन्थले बोलाए आफूपक्षीय सांसदहरूको भेला
काठमाडौं-जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूपक्षीय सांसदहरूको बैठक
ओली र नेपालबीच रामेश्वर थापा निवासमा वार्ता सुरु
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेता
बारपाक फोटो प्रतियोगितामा खुसीरामको फोटो उत्कृष्ट
नेपाल पर्यटन बोर्डले नियमित रुपमा आयोजना गर्ने फोटो नेपाल प्रदर्शनीमा
सरकारले कोरोना भाइसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन ग¥यो। साढे तीन महिनापछि लकडाउन खुकुलो भएपछि बन्द रहेका पोखराका सटर खुल्न थाले। अहिले सटर खोल्ने र बन्द गर्ने काम मात्र भइरहेको व्यवसायी बताउँछन्। पोखराको ठूलो उद्योग मानिने पर्यटन क्षेत्र पनि अहिले थलिएको छ।
सरकारले ल्याएको राहतका प्याकेज कसरी व्यवसायीसम्म पुग्छ भन्नेमा अन्योल नै छ। अहिले व्यवसायीको अवस्था, कोरोनाले सिर्जना गरेका अवसर, कोरोनापछि पोखराको उद्योग र पर्यटन क्षेत्र कसरी अघि बढ्छ भन्ने यकीन छैन।
यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आयोमेलका अनुप पौडेलले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीसँग गरेको कुराकानीः
लामो समय ठप्प व्यवसाय अहिले सञ्चालनमा आएका छन्। लकडाउनअघि र अहिलेको व्यापारको अवस्था कस्तो छ?
आममानिसमा अझैं पनि त्रास कायमै छ। त्यसैले अत्यावश्यक नभई मान्छे हिँडड्ल, भेटघाटको अवस्थामा छैनन्। चार महिने लकडाउनले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ।
सरकारले व्यवसायीलाई राहतको प्याकेज र कर्जाको भाका सारेर छुट दिएको घोषणा गरेपनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। योसहित विविध कारणले व्यवसायी तनावमा छन्।
लकडाउन खुलेको, पसल खुलेको भनेपछि घरबेटीलाई भाडा बुझाउनुपर्ने र त्यसका लागि स्रोत नभएकाले व्यवसायी समस्यामा छन्।
चैत ११ गतेभन्दा अघिको र अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने व्यापार १० प्रतिशत पनि छैन। व्यवसायी लामो समय घरमा बस्दा आत्तिएर खोल्ने वातावरण बनेको छ, व्यापार गर्ने वातावरण बनेको छैन।
व्यवसायीसँग आफैले लगानी गर्ने पैसा पनि छैन, बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने-नगर्ने भन्नेमा पनि अत्यन्त अप्ठेरो छ। सरकारको सहयोग पनि छैन, व्यवसाय छोड्न र गर्नसक्ने अवस्था छैन।
सरकारले व्यवसायीलाई राहतसमेत समेटेर बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले पनि व्यवसायीलाई सम्बोधन गरेजस्तो देखिन्छ। यसलाई कसरी उपयोग गर्न सकिएला?
सरकारले निजी क्षेत्र सन्तुष्ट हुने गरी बजेट ल्याउन सकेको छैन। यद्यपि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले व्यवसायीका धेरै माग समेटेको छ।
हिजोका दिनमा सरकारले ल्याएका पुनर्कर्जा, छुट पहुँच भएका, हुनेखाने व्यवसायीसम्म मात्रै पुग्थ्यो। यस पटकको मौद्रिक नीतिले मध्यम, निम्न र स्वरोजगार व्यवसायीलाई समेटेको देखिन्छ। कार्यान्वयन गर्दा पनि यो वर्गसम्म पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं।
राष्ट्र बैंकलाई त्यहीँ किसिमले गृहकार्य गर्न अनुरोध गरिरहेका छौं। मौद्रिक नीतिबाट आशा गरेका छौं, कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनेर पर्खाइमा छौं।
सरकारले ल्याएका छुट प्रभावित व्यवसायीसम्म कसरी पुर्‌याउन सकिएला?
करको दायरामा नगएका व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्न कठिन छ। तर, दर्ता गरी करको दायरामा गएका र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर चलेका व्यवसायको रेकर्ड बैंकसँग हुन्छ।
व्यवसायीले ब्याज तिर्न सकेका छन् कि छैनन्, कसरी चल्छ भन्ने सबै जानकारी छ।
राष्ट्र बैंकले चाहेमा आफूसँग कारोबार गर्ने व्यवसायीको विवरण लिन सक्छ, त्यसैले अप्ठेरो हुँदैन। कार्यान्वयन तहमा कसरी जाने भन्ने चाहिँ बैंकको इच्छाशक्तिमा भरपर्छ।
कोरोनाका कारणले कतिको रोजगारी गुम्यो, पोखराको हकमा श्रमिकको अवस्था के छ?
श्रमिकमाथि अन्याय गर्न हुँदैन भनेर उद्योगी व्यवसायीलाई भन्दै आएका छौं।
श्रमिकले पनि घरमा बसेर पूरै तलब चाहियो भन्न पनि सुहाउँदैैन। यस्तो अवस्थामा उद्योगीव्यवसायीले श्रमिकलाई कामबाट निकालेर झन् अर्को समस्यामा पार्न पनि हुँदैन।
दुबै पक्षको समझदारीमा व्यवहार चलाउन सकिन्छ। अहिलेको विषम् परिस्थितिलाई भोलिको दिनमा कसरी पुनरोत्थान गर्ने विषयमा सोच्ने वातावरण बन्नुपर्छ। घरधनीलाई पनि बहालमा सक्दो छुट दिन अनुरोध गरेका छौं। छुट दिएपछि बाँकी रहेको रकम पनि पछि तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्दिनुस् भनेर आग्रह गरेका छौं।
श्रमिकसँगै कतिपय व्यवसायी पलायन भएको सुनिएको छ। पोखरामा कस्ता व्यवसायी पलायन भएका छन् ?
स्वाभाविक हिसाबले पोखरामा पनि त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। जानकारी दिएर व्यवसाय छाडेका छैनन्। अन्य व्यवसायीबाट थाहा पाएका छौं।
लेकसाइड क्षेत्रका केही होटल र पसलका सञ्चालकले बहाल तिरेर बस्नुपर्ने भएकाले व्यवसाय छाड्नु भएको छ। त्यहाँको पर्यटन व्यवसाय अझैं लामो समय चल्ने स्थिति छैन।
धरौटी रकम थोरै भएका र तिर्नुपर्ने धेरै भएका व्यवसायीले छोड्नुभएको छ, भने धरौटी रकम धेरै हुने बस्नुभएको सुन्नमा आएको छ।
पोखरामा मात्रै नभएर देशैभर यस्तो समस्या छ। व्यवसायीलाई नआत्तिन, धैर्यताका साथ बस्न भनेका छौं।
पोखराको व्यवसायिक क्षेत्र अब कुन दिशातर्फ जाला?
विश्वको अर्थव्यवस्था नै कसरी चल्छ भन्ने ठेगान छैन। यो अवस्थामा पोखरामा होटल, पर्यटन र यातायात क्षेत्र झनै प्रभावित छन्। यी क्षेत्र लामो समयसम्म पुनरोत्थान भएर जान सक्दैनन् ।
पोखरामा ठूलाभन्दा पनि मझौला र साना उद्योग धेरै छन्। मझौला र साना उद्योग पुनरोत्थान भएर चल्न सक्छन्। तर, पर्यटन र यातायात क्षेत्र लामो समयसम्म पुरानै अवस्थामा फर्कन सक्दैन।
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप प्रयोगमा नआउन्जेलसम्म व्यवसाय पहिलेकै स्थितिमा फर्कने अवस्था देखिँदैन।
सीमा जोडिएको छिमेकी मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेकाले त्यसको असर हाम्रोमा पनि पर्छ। भारतबाट तराईमा आउने र तराईबाट पहाडमा मान्छेको आवतजावतको कारणले गर्दा त्रास छ। त्यसैले व्यवसायलाई तुरून्त रिकभर गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्था छैन।
समस्याले नयाँ बाटो पहिल्याउँ भनिन्छ, अब उद्योग–व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्र कसरी अघि बढ्छ?
कोरोनाले पर्यटन र उद्योगको क्षेत्रमा त्यति धेरै अवसर ल्याएको देखिँदैन। प्रचलनमा रहेकोे ट्रेन्डलाई परिवर्तन गरेको छ।
हिजो उद्योगको क्षेत्रमा स्वास्थ्य सामग्री बाहिरबाट खरिद गरेर यहाँ बेच्नेमात्रै गरिन्थ्यो। अब कतिपयले स्वदेशमै उत्पादन गर्न थालेका छन्।
बजारमा मास्क र स्यानिटाइजर अभाव भएपछि मेसिन ल्याएर पोखरामै उत्पादन हुन थालेको छ। कोरोनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ फड्को मार्ने र स्तरोन्नति गर्ने अवसर मिलेको छ। उद्योग र पर्यटनको क्षेत्रमा नयाँ अवसर देखिँदैन।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनाव नजिकिदै छ। नेतृत्व कसरी छनोट गर्नुहुन्छ?
महासंघको चुनावका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधान टीम नै बनाएर अघि बढ्नुभएको छ।
चैत अन्तिममा हुने भनिएको चुनावी साधारणसभा साउनको २६ र २७ गते तोकिएको थियो। तर सरकारले सभा–सम्मेलन नगर्न भनेकाले अहिले स्थगित भएको छ।
हामीले दुवै पक्षका उम्मदेवारलाई योग्य व्यक्ति छान्छौं भनेका छौं। कुनै एउटा उम्मेदवारको पछाडि आँखा चिम्लेर व्यक्तिका कारणले समूहमा नै बिलिन हुने गरेर लाग्न सक्दैनौं।
तपाईंहरू मिलेर आउनुस् भनेर आग्रह गरेका छौं, यदि निर्वाचनमै जानुहुन्छ भने व्यवसायीको निम्ति लाग्ने ,व्यवसाय प्रवर्द्धनदेखि व्यवसायीको समस्यासँग जुध्ने उम्मेदवारको पक्षमा लाग्ने छौं।
हामी कुनै एउटा प्यानल भनेर लाग्दैनौं भनेर भन्दै आएका छौं। र, लाग्दैनौं पनि।
काठमाडौं-जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूपक्षीय सांसदहरूको बैठक बोलाएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटवार्ता लगत्तै ठाकुरले आफू
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेता माधव नेपालबीच वार्ता सुरू भएको छ। बूढानीलकण्ठको चपली घुम्तीस्थित अन्नपूर्ण
नेपाल पर्यटन बोर्डले नियमित रुपमा आयोजना गर्ने फोटो नेपाल प्रदर्शनीमा यस पटक खुसीराम घलेको फोटोलाई उत्कृष्ट घोषणा गरिएको छ। योसँगै